Inflatable Board Factory |China Inflatable Board Manufacturers, Suppliers
EGGORY Inflatable Simuka Paddle Board,10′x 32″x 6″ |SUP Surfboard ine Premium SUP Zvishandiso & Inotakurika Yekutakura Bhegi, Leash, Paddle uye Pombi, Chikepe Chakamira cheVechidiki & Vakuru.
EGGORY foldable paddle boards ari nyore kwazvo kutakura uye kumisikidza, ayo anogona kukurumidza kuputika nekudzikisira kutakura.Zviri nyore kusimuka uye kuenzanisa paEGGORY 10′ x 32″ x 6″ paddle board.Yakagadzirwa nemauto giredhi PVC uye isingaverengeke inodonhedza stitch yemukati chimiro, iyo inopa kugadzikana uye kuchengetedzeka kwenguva yakareba use.Maximum kugona kunosvika 330 lbs.
Mabhodhi edu ekusimuka akagadzirirwa vanhu vemhando dzese dzehunyanzvi, nekuti iyo yakapfava EVA yepamusoro ine anti-slip embossing inoita kunzwa kunyaradzwa kunoshamisa uye inokonzera tsaona shoma uye kukuvara pakudonha.EGGORY Foot Leash inoita kuti zvive zvakachengeteka kusefa uye kudzivirira kurasikirwa kwako paddle board.
Chinouya chese chinodiwa zvinosanganisira chimedu chimwe chinofefetera papuratifomu base, 3-chidimbu kureba chinochinjika chinoyangarara chiya chisingazonyura, pombi yemaoko ine mhepo yekumanikidza geji, kuchengetedza leash / tambo, yepasi mapaneru zvimbi, vharafu inogadzirisa, hombe yakagadzika bhegi rinobata zvese.
EGGORY simuka paddle board inogona kushandiswa mumhando dzese dzemvura nemamiriro, gungwa, dhamu nerwizi, inoshingirira zvese zviri zviviri mvura yakachena uye ine munyu.SUP paddle boards yakanakira Yoga, kusefa, kubata hove, kushanya, snorkeling, kana kukwesha kutandadza.
Chigadzirwa chiri nani chinokodzera kirasi yepamusoro mushure mebasa.Kugutsikana kwemutengi ndiko kunogara kuchiteverwa neEGGORY.Isu tinopa 1-gore mugadziri waranti.Chero dambudziko nepaddle board kana SUP accessories, ndapota inzwa wakasununguka kutibata nesu kuburikidza neAmazon kana yedu Service email, tichakupa 100% mhinduro inogutsa ne7 * 24hours online service customer service.
Simuka Paddle Board Surf Inflatable Yakapfava Yepamusoro Mhepo Sup Ine Zvipedzi Mabhodhi Inosanganisira Gungwa Surfboard Mvura 10'6″
inflatable paddle board ndeye 11′long x 33”wide x 6” gobvu, ine huremu hunosvika 350lbs. Iyo yakawedzera yakafara SUP dhizaini iri nyore kune vanotanga kusimuka uye kuchengeta mwero.Iyo yakanakira yese yakatenderedza paddle board yevakuru, vechidiki, vechidiki uye nemhuka dzinovaraidza dzeese hunyanzvi mazinga.
Nekukurumidza inflates uye deflates kuti kutakura, kupengeka paddle mabhodhi ari nyore kwazvo kutakura uye kumisikidza.Yedu Ultra light sup ine huremu hunotungamira muindasitiri hwemapaunzi makumi maviri chete-ndiyo 20% yakareruka pane yevanokwikwidza 'inflatable sup yehukuru hwakafanana.stand up paddle board inogona kushandiswa mugungwa, nyanza nerwizi, inomira mumvura yakachena uye ine munyu.SUP paddle boards yakanakira Yoga, kusefa, kubata hove, kushanya, snorkeling, kana kukwesha kutandadza.
Mapaddle board anomira akagadzirwa nemhando yepamusoro-soro yegiredhi remauto.Iri rakasimbiswa risingaremi jira rinogadzira yakaoma, yakaomarara uye yakasimba inoputika sup board inogara kwenguva refu kwemakore.Soft anti-slip EVA deck pad yakavandudza zvakanyanya kugadzikana uye kuchengetedzeka wakamira.Iyo yakagadzika inflatable paddle board kwenguva yakareba sup paddling kayaking.Unogona kuwana akasimba kwazvo asingaremi epaddle board pamusika.
Bluebay Yese yakachipa yakachipa iSUP CE Sitifiketi inofefetera simuka paddle board yakapfava sup board
1.bluebay paddle boards ndiyo yako yekutanga sarudzo yemitambo yemvura.inflatable paddle boards (SUP) yakakodzera kune ese hunyanzvi Ma Level kuti unakirwe, kuongorora, kana kushanya munzvimbo dzemvura.2.The new Ultra light military grade double wall PVC i35% yakareruka pane yakafanana saizi zvigadzirwa (20.4 pound), ine yakanakisa kupfeka kuramba, kusimba uye refu sevhisi upenyu.3.unique ergonomic mubato dhizaini inobvumidza iwe kuti inflate paddle yako zviri nyore munguva pfupi.Iyo sensitive barometer inovimbisa kuti ...
EGGORY Inflatable Simuka Paddle Board, 10'6″x 32″x 6″ SUP Surfboard
EGGORY foldable paddle boards ari nyore kwazvo kutakura uye kumisikidza, ayo anogona kukurumidza kuputika nekudzikisira kutakura.Iyo EGGORY stand up paddling board ndeye 10'6 ″ kureba uye inopa 32 ”yedeki hupamhi hwekuvandudza kugadzikana uye kudzikama payakamira. Yakagadzirwa nemauto giredhi PVC uye isingaverengeke inodonha stitch yemukati chimiro, iyo inopa kugadzikana uye kuchengetedzeka kwekushandisa kwenguva yakareba. .Maximum capacity inosvika 330 lbs
Iyo Blue Bay 10'6” ft inoita zvakanaka mumamiriro ese emvura uye inokodzera mazinga ese ehunyanzvi.Yakavakwa kubva kune yakanakisa mhando yakarukwa tekinoroji inodonha-inodonha, zvinoreva kuti mabhodhi edu akareruka, akasimba, akaomarara uye anoteerera zvakanyanya.
【Yakawedzera Yakakura uye Yakagadzikana Dhizaini】Iyi inflatable stand-up paddle board ndeye 10' kureba, 30 ″ yakafara uye 6 ″ gobvu, ichikutendera kuti uwane kugadzikana uye kudzikama kana wakamira pairi.Yayo yakawedzera-yakapamhama dhizaini uye mutoro wekutakura unosvika 352 lbs inoita kuti ive yakakodzera kune ese hunyanzvi mazinga.
Iyo Blue Bay 11” ft iSUP yanga ichishanduka kubva patakatanga.Yakavakwa kubva pamhando yepamusoro yehuni-zviyo yakarukwa tekinoroji inodonhedza, zvinoreva kuti mabhodhi edu akareruka, akasimba, akaomarara uye anoteerera zvakanyanya.
Kubva pane yedu yekirasi surf composite rondedzero, mhino nhete haibatwe nekutendeuka, nzvimbo yakamira yakafara inopa kugadzikana uye kudhonzwa mumuswe inoita kuti utendeuke.
Touring board SIZE: 11′x33″x6″.iyo yakafara dhiza inopa yakagadzikana, inokurumidza uye inonakidza yekukwesha ruzivo, yakakodzera kune ese hunyanzvi mazinga.Yedu inflatable paddle boards yakagadzirwa nemhando yepamusoro yemauto giredhi MSL zvinhu (pre-laminated double layer DWF).Huremu hwemakirogiramu 17,6 chete nehuremu hunorema hwemakirogiramu mazana matatu nemakumi matatu.